व्रत बसेकी महिलासँग यौ नस म्पर्क गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? जानिराखौँ – Jagaran Nepal
व्रत बसेकी महिलासँग यौ नस म्पर्क गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? जानिराखौँ
अधिकांश हिन्दू महिलाहरु ती जको व्रत बस्ने बेला अाएकाे छ । निराहार उपवास बसी श्रीमानको मंगल कामना गर्दै विहानैदेखि शिव मन्दिरमा पुजा अर्चना गर्छन । परापूर्व कालमा पार्वतीले भगवान शिवलाई पति पाउँ भनि निराहार व्रत बसको र सोही व्रतका प्रभावले शिवलाइ पतिका रुपमा पाएको भन्ने हिन्दूशास्त्रमा उल्लेख छ ।
सोही कारण पनि हिन्दू महिलाहरुले आजको दिन शिव मन्दिरमा शिव र शिवलिंगको विशेष पूजा गर्ने गर्दछन् । अन्य बार तथा दिनहरुमा फलफूल आहार गर्दै व्रत बसेपनि तीजको व्रतमा अधिकांश महिलाहरुले निराहार व्रत बस्ने हुँदा यसदिन महिलाहरु अन्य समयमा भन्दा विशेष रुपमा थकित हुन्छन् । सोही कारण पनि हिन्दू धर्मशास्त्रले महिला व्रत बसेको दिन यौ न सम्पर्क नगर्नु भनेको छ ।
दिनभर भगवानको नाउँमा उप वास बसेकी महिलामाथि सह वासको कुरा सोच्न पनि न हुने हिन्दूशास्त्रमा उल्लेख छ । व्रत बसेको दिन उनीहरु मानसिक रुपमा पनि तयार हुन नसक्ने र शारीरिक रुपले पनि निकै थकित हुने हुँदा सहवा सका लागि बाध्य बनाउन नहुने परम्पारागत मान्यतासमेत रहेको पाइन्छ ।
तीजमा व्रत बसेकी महिला बेलुका श्रीमानसँग नसुति अलग्गै सुत्नु पर्नेमा शास्त्रले जोड दिएको छ । तीजमा विवाहिता महिलाहरु श्रीमानको घरमा नबसी माइतीमा बस्नुलाई पनि सहवासको अर्थसँग जोडिएको धर्मशास्त्रीय मान्यता रहेको शास्त्रका ज्ञाताहरु बताउँछन् । धार्मिक आस्थाले भगवानप्रति भक्तिभाव लगाइरहेका बेला कामवासनालाइ नियन्त्रण नगरी यौ न क्रि डामा लिप्त हुँदा व्रतको फल नपाइने पनि शास्त्रमा उल्लेख छ ।
यद्यपी चिकित्सा विज्ञानले भने धर्मशास्त्रका कुरालाई अस्वीकार गर्दछ । यौ न मानव जीवनको समान्य प्रकृया भएकाले महिला मानसिक तथा शारीरिक रुपले तयार भएमा सह वास गर्दा फरक नपर्ने चिकित्सकहरुले बताउँछन् । निराहार व्रत बसेका बेला भने महिलाहरु थकित हुन सक्छन् । यस्तो बेलामा शरिरमा पानी, ग्लुकोज तथा क्यालोरीको कमी हुने भएकाले महिलाहरु यौ नसम्प र्कका लागि तयार हुन कठिन हुने भएकाले आफ्नो पार्टनरको मनो भावनालाइ बुझेरमात्र यौ नस म्पर्क गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् ।